Izikhundla Ezinhlanu Ezizuzisayo kunoma iyiphi iMakethe | Martech Zone
Izikhundla ezinhlanu ezinenzuzo kunoma iyiphi iMakethe
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 23, i-2010 NgeSonto, ngoMashi 24, 2013 UGrant Lange
Empilweni yami yangaphambili yezinkampani, bengimangala njalo ngegebe lokuxhumana phakathi kwabantu abenza imikhiqizo, nabantu abayimakethayo nabayithengisayo. Ukuba ngumuntu othanda ukusebenzisa utshwala futhi ngixazulula izinkinga emphakathini, ngangihlala ngizama ukuthola indlela yokuvala igebe phakathi kwabenzi nabathengisi. Kwesinye isikhathi le mizamo yayiphumelela, kwesinye isikhathi yayingaphumeleli. Kepha ngenkathi ngizama ukuxazulula ukusebenza kwangaphakathi kwezinhlangano engizisebenzele, ngikhubeke kulokho engikholelwa ukuthi kungamaqiniso athile aphathelene nokubeka uphawu nokuthuthukiswa komkhiqizo.
Iqiniso lokuqala, Ukugxila Komkhiqizo, kuchazwa lapha.
Iqiniso lesibili, Isikhundla Sesigaba, ukuthi izinkampani zincintisana kanjani ezimakethe, nokuthi isikhundla emakethe sizokhomba kanjani impumelelo. Okulandelayo incazelo emfushane yalo mqondo, kanye nezibonelo zesikhundla ngasinye. (umbhalo wombhali: Ngikholwa ukuthi isisekelo saleli qiniso sivela encwadini efundwe ngenkathi ngithuthuka, ngakho-ke uma lokhu kuzwakala kujwayelekile, ukuthi uma ungumbhali wencwadi, ngicela ungazise. Kade ngizama ukuthola umthombo wami wokuqala cishe iminyaka engamashumi amabili)
IMicrosoft, njengenkampani enkulu yezizwe ngezizwe, incintisana yonke indawo. Emikhiqizweni yabo eminingi, abanesabelo semakethe kuphela, kepha bangabaningi cishe yonke imakethe. Kodwa kwezinye izindawo bangabesibili, owesithathu, noma owesine ekude. Kungani kunjalo? Yize impendulo egcwele yinde futhi inobuchwepheshe, impendulo esezingeni lomthengi ilula kakhulu: izigaba, hhayi imikhiqizo, zichaza impumelelo emakethe.
Isigaba, esichazwe kalula, lokho umsebenzisi wakho angahlukanisa umkhiqizo wakho ukuthi ube yikho. Uma bengingakubuza ukuthi luhlobo luni lomkhiqizo iWindows XP, ungangitshela? Uhlelo olusebenzayo?. Ngakho-ke i-Operating System ibizoba yisigaba somkhiqizo, kanti iMicrosoft izosilawula ngokucacile isigaba.
Kepha uma ngikukhombisa iZune futhi ngicela isigaba, ungangitshela Umdlali we-MP3. IMicrosoft ngokusobala ilahlekelwa lesi sigaba yi-Apple. Kungani iMicrosoft ingakhetha ukuncintisana lapha, kanti i-Apple ibusa kahle kangaka? Yebo, kuvela ukuthi kunemali okufanele yenziwe ibe yinombolo enhle noma ngabe inombolo yokuqala inkulu kakhulu. Eqinisweni kunezikhundla ezinhlanu ezihlukene esigabeni ezinenzuzo, uma wazi ukuthi uzisebenzisa kanjani.
Izikhundla Ezihlanu Zenzuzo Yesigaba
Izikhundla ezinhlanu ezinenzuzo kunoma yisiphi isigaba semakethe yilezi Umholi weMakethe, Owesibili, Enye, Isitolo, Kanye Umholi Wesigaba Esisha. Kuzo zonke lezi zikhundla kungenzeka ukwenza imali, futhi kukhule. Kepha kuseduze okungenakwenzeka ukusuka kwesinye isikhundla uye kwesinye ngaphandle kosizo lwangaphandle.
Emfanekisweni ongenhla, isikhundla ngasinye sithathwa endaweni yaso yokwabelana ngamakethe nosayizi. Njengoba ukwazi ukubona, osayizi baba bancane ngokushesha. Ngakho-ke kungani kungenakwenzeka ukuhamba? Ngoba lapho isikhundla ngasinye sincane kakhulu kunaleso esiphambi kwaso, utshalomali oludingekayo ukushintsha izikhundla lukhulu kakhulu kunenzuzo ekushintsheni.
Manje, ake sibheke isikhundla ngasinye ngazinye, ukubona ukuthi isikhundla ngasinye sehluke kanjani. Kulokhu kuvivinya umzimba, singasebenzisa isigaba se-cola, ngoba siqondwa kahle ngabantu abaningi.
Isikhundla Sokuqala: Umholi Wemakethe
UCoke, yiqiniso, ungumholi. Zikhona yonke indawo, futhi inzuzo yazo idumile. Bayisibonelo esihle somholi. Futhi ngoba banembangi enamandla kangako ePepsi, abakwazi ukuba nesabelo esengeziwe semakethe. Ngakho-ke okuwukuphela kwendlela yabo yokukhula ukufaka izimakethe ezintsha. Kungani? Ngoba kushibhile kakhulu ukuvula ukusatshalaliswa kweChina kunokukhipha uPepsi eSafeway.
Isikhundla Sesibili: Okwesibili
UPepsi ungowesibili onamandla. Futhi zikhona yonke indawo, futhi kucatshangwa ukuthi ukuphela kwendlela yeCoke. Manje zikhula kanjani? Ukuthatha isabelo kude neCoke kuyabiza futhi kunzima, kepha ukungena eChina unyaka owodwa ngemuva kukakhokho kulula kakhulu futhi kushibhile. Baqamba ekukhuleni kwesigaba sikaCoke.
Isikhundla sesithathu: Okuhlukile
Kwezinye izindawo zezwe i-RC Cola yi-Alternative. Kepha azikho yonke indawo, futhi azinawo amandla wokumaketha lezi ezimbili ezinkulu ezinazo. Manje zikhula kanjani? Indawo ngendawo. Bakhomba iziteshi ezithile lapho zingabonakala njengezasendaweni noma ezihlukile futhi zikhule? Endlini ngendlu?.
Isikhundla Sesine: Isitolo
IJones soda yiBoutique engagunci. Bathengisa i-cola, kepha uJones mncane nge-cola, futhi kakhulu mayelana nesipiliyoni se-cola. I-cola ingena kuphela emabhodleleni engilazi anoshukela omuncu omsulwa, ubuciko besiko kwilebula, nethegi lentengo ephezulu. Ngokusobala lokhu akuyona imincintiswano ejwayelekile kuma-majors. Noma kunjalo zinenzuzo, futhi zinokulandela okuthembekile. Kungani? Ngoba baletha ngokweqile eqenjini elithile labathengi be-cola.
Isikhundla sesihlanu: Umholi Wesigaba Esisha (i-NCL)
Ngakho-ke uma ufuna ukuphazamisa isigaba, ukwenza kanjani lokho? Ngokwami, bengizobuza ubuhlakani bemakethe ngemuva kweRed Bull. Bakha umbuso wonke batshela wonke umuntu ukuthi babengeyona i-cola, kodwa amandla?. Vele iRed Bull ayikwazanga ukuncintisana neCoke lapho beqala. Kepha babekwazi ukutshela abantu isigaba sabo, i-Energy, singcono. Futhi lokho akusikho ukuncintisana noCola vele? Basebenzise isigaba sabo esisha ukungena emashalofini ezitolo i-coke esivele iwina. Futhi bakwenzile bengakaze bancintisane neCoke noma uPepsi.
Kuhle, ngakho kungani lokhu kubalulekile?
Umbuzo omuhle. Impendulo yeza kulokhu: uma usazi isikhundla sakho, uyazi ukuthi ungancintisana kanjani ngokunenzuzo. Uma ungazi ukuthi umi kuphi, kungenzeka uthengiselwe uhlelo lwebhizinisi, lokumaketha, noma lokukhula oluzomosha imali eningi ukuzama ukukuyisa endaweni ongeke wayibamba. Okubaluleke kakhulu, uma ususazi isikhundla sakho, ungathuthukisa izinhlelo zebhizinisi nezokumaketha eziqinisa isikhundla sakho senzuzo, futhi zikhiqize amanani aphezulu enzuzo.
Tags: unikeziweizikhundla zokumakethaUmholi Wesigaba EsishaEnyeIsitoloUmholi weMaketheOwesibili
Ukuqondanisa iDigital kanye neNdabuko: Izinto Ezincane
Ubuchwepheshe Bezentengiso Obukhulu Kunabo Bonke
Kuhle njalo ukuyibuyekeza futhi ngiyayithanda kakhulu isethulo - Kwenziwe Kahle futhi kusobala ukuthi ngiyi-Boutique 🙂
I-twist eyodwa ethokozisayo ukuthi-kuya ngokuthi umthengi ufunani – ungaba sezindimeni ezahlukahlukene. Isibonelo, uJones ungumdlali ovelele kuma-boutique / craft / premium sodas, kodwa ngokusobala i-boutique lapho ibhekwa ngokumelene ne-coke.
Yilokho okwenza imisebenzi yethu ihehe kangaka.